Gudoomiye Jawaari: Soo jeedin ka timid Madaxweynaha ayaa loo hakiyay kulankii maanta ee Baarlamaanka | Maalmahanews
Gudoomiye Jawaari: Soo jeedin ka timid Madaxweynaha ayaa loo hakiyay kulankii maanta ee Baarlamaanka
Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) ayaa faah faahin ka bixiyay sababihii ka dambeeyay in la baajiyo kulankii maanta ay isugu imaan lahaayeen Xildhibaanada Golaha Shacabka Somaliya.
Gudoomiye Jawaari ayaa Suxufiyiinta wuxuu u sheegay in sababta ugu wayn ee kulankaasi loo baajiyay inay tahay soo jeedin ka timid Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/laahi (Farmaajo) oo soo jeediyay in la hakiyo kulanka.
Kulan xalay ka dhacay Madaxtooyadda oo waqti dambe la isla gaaray ayaa lagu go’aamiyay in la hakiyo kulanka maanta ee suuragal ay noqon laheyd inuu fowdo isku bedelo.
“Shirkii maanta loo balansanaa in la hakiyo, si arrinta xaajadda loo dajiyo si xasilooni looga wada hadlo arrinta, taasoo dhamaanteen aan uga wada aqbalnay, anagana aan uga mahadcelinayno, rasmi ahaan Xildhibaanada Golaha Shacabka waxaan u sheegayaa in soo jeedinta Madaxweynaha uu noo soo jeediyay in aan aqbalnay, anaga oo qadarinay xasiloonida siyaasadeed.” Ayuu yiri Gudoomiye Jawaari.
“Hadda wixii ka dambeeya Xildhibaanada dhamaan inay illaaliyaan midnimada iyo Badqabka Baarlamaanka ayaan ka codsanayaa inay nagu ayidaan.” Ayuu yiri Gudoomiye Jawaari.